Olee Ihe Ndị Ga-enyere Gị Aka Ịghọta Ihe Ị Na-agụ na Baịbụl?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kachin Kekchi Kikamba Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mapudungun Maya Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Udmurt Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Baịbụl n’onwe ya gwara anyị ihe ndị ga-enyere anyị aka ịghọta ihe e dere na ya. Ma ị̀ gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ na ị gụghị, ihe Chineke na-agwa anyị na Baịbụl agaghị ‘esiri gị oké ike, ọ dịghịkwa n’ebe dị anya.’​—Diuterọnọmi 30:11.
Ihe ndị ga-enyere gị aka ịghọta ihe ị na-agụ na Baịbụl
Kweta n’ihe Baịbụl kwuru. Kweta na Baịbụl bụ Okwu Chineke. Dịrị umeala n’obi n’ihi na Chineke anaghị anabata ndị mpako. (1 Ndị Tesalonaịka 2:13; Jems 4:6) Ma, ọ pụtaghị na a sị gị na ọ dị iri, gị achịrị wụnye n’akpa. Chineke chọrọ ka i jiri ‘ike iche echiche’ gị chọpụta nke bụ́ eziokwu.​—Ndị Rom 12:​1, 2.
Rịọ Chineke ka o nye gị amamihe. N’Ilu 3:​5, Baịbụl sịrị gị “adaberekwala ná nghọta gị.” Kama ịdabere ná nghọta gị, “na-arịọ Chineke” ka o nye gị amamihe ị ga-eji ghọta ihe ị na-agụ na Baịbụl.​—Jems 1:5.
Na-amụ Baịbụl mgbe niile. Ị ga-aka erite uru ma ọ bụrụ na ị na-amụchi Baịbụl anya karịa ịna-amụ ya mgbe ọ dabara.​—Jọshụa 1:8.
Ị mụchaa otu ihe Baịbụl kwuru gị agafee n’ọzọ. Otu ụzọ ị ga-esi ghọta ihe Baịbụl na-akụzi bụ ịhọrọ otu ihe ma lee ihe Baịbụl kwuru gbasara ya. Ị mụchaa nke ahụ, gị ahọrọkwa ọzọ ị ga-amụ. Buru ụzọ mụọ ndị nke dị mfe. E mechazie gị amụwa ndị nke e nwere ike ikwu na ha bụ maka ndị ‘tozuru okè.’ (Ndị Hibru 6:​1, 2) Ị na-eme ya otú a, ọ ga-enyere gị aka iji ihe e dere n’otu amaokwu Baịbụl ghọta ihe e dere n’amaokwu ọzọ, ị ga-ahụkwa otú otu amaokwu Baịbụl si akọwa ibe ya, ọ sọgodị ya ya bụrụ amaokwu ndị “siri ike nghọta.”​—2 Pita 3:16.
Gwa ndị ọzọ ka ha nyere gị aka. Ihe e dere na Baịbụl na-egosi na anyị kwesịrị ikwe ka ndị ọzọ nyere anyị aka ịghọta ihe dị na Baịbụl. (Ọrụ Ndịozi 8:​30, 31) Ndịàmà Jehova na-agwa ndị mmadụ ka ha na ha na-amụ Baịbụl na-anaghị ha ego. Ha na-eji amaokwu Baịbụl dị iche iche enyere ndị mmadụ aka ịghọta ihe Baịbụl na-akụzi otú ahụ Ndị Kraịst oge mbụ mere.​—Ọrụ Ndịozi 17:​2, 3.
Ihe ndị na-adịghị gị mkpa iji ghọta ihe ị na-agụ na Baịbụl
Inwe oké amamihe ma ọ bụ ịgụ oké akwụkwọ. Ndịozi iri na abụọ Jizọs ghọtara ihe dị n’Akwụkwọ Nsọ ma kụziere ya ndị ọzọ n’agbanyeghị na ụfọdụ ndị weere ha ka “ndị na-agụghị oké akwụkwọ na ndị nkịtị.”​—Ọrụ Ndịozi 4:13.
Ego. Ọ gaghị efu gị ego iji mụta Baịbụl. Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Unu natara n’efu, na-enyenụ n’efu.”​—Matiu 10:8.
Baịbụl Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Ihe Ga-enyere Gị Aka Ịghọta Ihe Baịbụl Na-ekwu
Ọ bụrụ na e dere Baịbụl ka ọ dị mfe nghọta, gịnị mere ị ga-eji chọwa ka e nyere gị aka ịghọta ya?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Ihe Ndị Ga-enyere Gị Aka Ịghọta Ihe Ị Na-agụ na Baịbụl?
ijwbq isiokwu 40
Olee Otú M Ga-esi Malite Ịgụ Baịbụl?
Gịnị Mere E Ji Nwee Baịbụl Dị Iche Iche?